Lucas Vazquez Oo Ka Hadlay Ku Biirista Kooxda Manchester United
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Lucas Vazquez oo ka hadlay Ku biirista Kooxda Manchester United
Lucas Vazquez ayaa u muuqday mid meesha ka saaray suurtogalnimada uu ugu biirayo kooxaha Manchester United iyo Chelsea isagoo ku adkeysanaya inuu “waligiis ahaan doono xidig Real Madrid ah”.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Spain, oo door muhiim ah ka ciyaaray Los Blancos xilli ciyaareedkan, ayaa lagu wadaa inuu qandaraaskiisa dhacayo xagaaga.
Madrid ayaa la rumeysan yahay inay u soo bandhigtay 29 jirkaan heshiis qaali ah oo uu ku sii joogayo, laakiin United iyo Chelsea ayaa la socda xaaladiisa ka hor furitaanka suuqa kala iibsiga.
Si kastaba ha ahaatee, isagoo hadlaya ka dib markii uu ciyaaray 90-kii daqiiqo ee kulankii ay kooxdiisu 3-1 uga badisay Liverpool lugta hore ee wareega 8da Champions League Talaadadii, Vazquez ayaa ka dhawaajiyay inuu diyaar u yahay inuu heshiis cusub la gaaro ka dib markii si joogta ah loo isticmaalay xilli ciyaareedkan.
“Waxa aan xooga saarayo waa waxa jira,” ayuu yiri. “Xaqiiqdii waan ku raaxeysanayaa nafsadeyda xilli ciyaareedkan maxaa yeelay waan ciyaarayaa waana waxa iga farxiya.
Waxaan kordhiyaaa qandaraaska, weligayna waxaan ahaan doonaa xidig Real Madrid ah. ”
Vazquez, oo sidoo kale lala xiriirinayo Bayern Munich , ayaa sameeyay isku dar sideed gool, isagoo inta badan loo isticmaalay daafac midig oo kumeelgaar ah.
Previous articleZidane Zidane oo albaabada u furay inuu macalin u noqdo Juventus.
Next articleArsenal oo diyaar u ah ineey iska iibiso weeraryahanka faransiiska Lacazetta